Al-Shabaab oo war la yaab leh kasoo saaray Sarkaal ay dileen - Awdinle Online
Al-Shabaab oo war la yaab leh kasoo saaray Sarkaal ay dileen
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda dil xalay degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo loogu geystay Sarkaal ka tirsanaa Ciidmada Millateriga Soomaaliya.
Sarkaalka oo lagu Magacaabi jiray Diiriye Ubow ayaa Shabaab waxaa ay sheegeen inay si qarsoodi ah ku galeen degmada isla markaana ay ku dileen sarkaalka.
Waxaa ay sheegay in Sarkaalka uu Caan ka ahaa degaannada Gobolka Gedo, isla markaana uu xiriir wadashaqeyn la lahaa Ciidamada Itoobiys ee ku sugan degaano ,sidoo kalena dilka kadib ay ka qaateen qoray AK47 ah oo uu watay.
Al-Shabaab ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ay kordhiyeen dilalka Saraakiisha Ciidamada, waxaana dhawaan ay Muqdisho ku dileen Saraakiil ka kala tirsan Booliska iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano Bangaraafta.
Previous articleDoonyo iyo maraakiib ku xayiran xeebta Boosaaso
Next articleSoomaaliya iyo Norwey oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah